ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝအတွက် ဗောဓိ တရားအားထုတ်ခြင်း -
(ဗီဒီယိုဖိုင်အသစ်ထွက်ရှိခြင်း) ဘဂွါစွမ်းအင်အခြေခံအဆင့်သင်ကြားခြင်း DVD
ဓါတ်ပုံ အယ်လ်ဘမ် |
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဓာတ်ဖိုနှင့် ဓာတ်မတို့ကို ကြည့်ရှုပါ အစဉ်အားဖြင့် အခြေအနေတစ်ခုတွင် အဖိုနှင့်အမ ဟူ၍ နှစ… ဆကျဖတျရနျ
စိတ် & ကိုယ်ခန္ဓာ |
မိသားစု & အလုပ်အကိုင် |
Miao-yi သည် မွေးဖွားပြီးသိပ်မကြာခင်ပဲ ပြင်းထန်သည့် နှင်းခူနာရောဂါကို ခံစားခဲ့ရသည်။ အခြားကလေးများနှင့်မတူဘဲ၊ သူမသည် ချိုသောသကြားလုံးများ၊ အထူးသဖြင့် သူမအကြိုက်ဆုံး ဒိုးနက်မုန့်များကို မစားနိုင်ပါ။ သူမ၏မိခင…
Miao-yi သည် မွေးဖွားပြီးသိပ်မကြာခင်ပဲ ပြင်းထန်သည့် နှင်းခူနာရောဂါကို ခံစားခဲ့ရသ… ဆကျဖတျရနျ
1. Fang-ye သည် အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ပြဿနာရှိသည့် ရောဂါကို ခံစားနေရသည်။ ခွဲစိတ်မှုပြုပြီးနောက် ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေး မှုဖြစ်လာသည်။ သူမသည် တရားထိုင်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်းအား ဖတ်ရှုရန် အခွင့်အရေးရလာခဲ့ပြီး သူမက…
1. Fang-ye သည် အသည်းလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ပြဿနာရှိသည့် ရောဂါကို ခံစားနေရသည်။ ခွဲစိတ… ဆကျဖတျရနျ
အယ်လီဇာ ဆန်းစ်(Alyssa Sands)မှဘာသာပြန်ဆိုသည် ဒရင်းမ်ဒေးဗစ်(Dream David)မှ သရုပ်ဖော်သည် တောင်တန်းတစ်ခုရဲ့ ခြေရင်းတစ်နေရာရှိ ကွင်းပြင် တစ်ခုမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုတည်ရှိပြီး မိုးတွေရွာရင် အဆောက် အဦးတေ…
အယ်လီဇာ ဆန်းစ်(Alyssa Sands)မှဘာသာပြန်ဆိုသည် ဒရင်းမ်ဒေးဗစ်(Dream David)မှ သရ… ဆကျဖတျရနျ
မာရီလင် အမ်းဘရော့ခ်ျ(Merilyn Umbroh)မှဘာသာပြန်ဆိုသည် ဒရင်းမ်ဒေးဗစ်(Dream David)မှ သရုပ်ဖော်သည် ဆုဒေါင်းပို လို့ခေါ်တဲ့ နာမည်ကျော် ပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ ဆရာတော် ဖုယင်တို့ဟာ အရမ်းခင်မင်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း တွေ…
မာရီလင် အမ်းဘရော့ခ်ျ(Merilyn Umbroh)မှဘာသာပြန်ဆိုသည် ဒရင်းမ်ဒေးဗစ်(Dream David… ဆကျဖတျရနျ